မန်ယူ vs ဝက်စ်ဘရွန်း သုံးသပ်ချက် – Sport Gaber
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် Vs ဝက်စ်ဘရွန်း ( တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၂:၃၀ ) စုစုပေါင်း ၂၄ ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာ ယူနိုက်တတ်က ၁၅ ကြိမ်နိုင် ၊ ဝက်စ်ဘရွန်းက ၄ ကြိမ်နိုင်ပြီး ၅ ကြိမ် သရေ ကျထားပါတယ်။ ယူနိုက်တတ် အနေနဲ့ကတော့ အိမ်ကွင်း မှာ ၆ ပွဲ ၊ အဝေးကွင်းမှာ ၉ ပွဲအထိ နိုင်ဖူးထားပြီး ၊ ဝက်စ်ဘရွန်းက အိမ်ကွင်း တစ်ကြိမ် ၊ အဝေးကွင်း ၃ ကြိမ်နိုင်ထားဖူးပါတယ်။ နောက်ဆုံး ယှဉ်ပြိုင်ထားတဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ နဲ့ ၂၀၁၈ ဧပြီလ ရလဒ်များ အရတော့ ယူနိုက်တတ်ဟာ ၂ ကြိမ်လုံး ရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်။
နောက်ဆုံး ၅ ပွဲ ရလဒ်များကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့ ယူနိုက်တက်ဘက်က ( W,L,D,W,L ) ရှိနေပြီး ဝက်စ်ဘရွန်းကတော့ ( L, L, D, D, L ) ဆိုတဲ့ ရလဒ်များထွက်ပေါ်ထားပါတယ်။
ဝက်စ်ဘရွန်း ရဲ့ အခုနှစ် ခြေစွမ်းကတော့ လုံးဝ အကျဘက်မှာ ရှိနေသလို ယူနိုက်တတ် ရဲ့ အခုနှစ် ခြေစွမ်းကလည်း သေတစ်နေ့ မွေးတစ်နေ့ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အခုနှစ် ဘောလုံးရာသီ စစချင်းကနေ အခု ပွဲစဉ် ၉ အထိ ရမှတ်များ ရလဒ်များကို တွက်ချက်ကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ ယူနိုက်တက် က ၃ ပွဲနိုင် ၊ ၁ ပွဲသရေ ၊ ၃ ပွဲရှုံး ရလဒ်ဖြင့် အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၁၄ နေရာတွင် လည်းကောင်း၊ ဝက်စ်ဘရွန်းက နိုင်ပွဲ မရှိ ၊ သရေ ၃ ပွဲ ၊ ၅ ပွဲရှုံး ရလဒ်ဖြင့် အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၁၈ နေရာတွင်လည်းကောင်း အသီးသီး အပြိုင်အဆိုင်ရပ်တည်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ ၂ သင်း မှာ ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတာကတော့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် က ၅ ဂိုး သွင်းယူပေးထားပြီး သူ့နောက်မှာတော့ မားကပ်ရက်ဖိုဒ့် နှင့် ရော်ဘင်ဆင် တို့က ၂ ဂိုးစီ သွင်းယူပေးထားကြပါတယ်။ ဂိုးဖန်တီးမှုမှာလည်း ဖာနန်ဒက်စ် နှင့် ရက်ဖို့ဒ့်တို့က ၃ ကြိမ် ဖြင့် ဦးဆောင်နေပြီး သူတို့နောက်မှာတော့ တစ်ဖက်အသင်း ကစားသမား ပီရဲရား ရှိနေပါတယ်။
ကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် David Coote , Assistants: Lee Betts, Nick Hopton. Fourth official: Martin Atkinson. VAR: Peter Bankes. Assistant VAR: Andy Halliday တို့က အသီးသီးတာဝန်ယူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
မနျခကြျစတာယူနိုကျတကျ Vs ဝကျဈဘရှနျး ( တနငျ်ဂနှနေေ့ မနကျ ၂:၃၀ ) စုစုပေါငျး ၂၄ ကွိမျတှေ့ဆုံမှုမှာ ယူနိုကျတတျက ၁၅ ကွိမျနိုငျ ၊ ဝကျဈဘရှနျးက ၄ ကွိမျနိုငျပွီး ၅ ကွိမျ သရေ ကထြားပါတယျ။ ယူနိုကျတတျ အနနေဲ့ကတော့ အိမျကှငျး မှာ ၆ ပှဲ ၊ အဝေးကှငျးမှာ ၉ ပှဲအထိ နိုငျဖူးထားပွီး ၊ ဝကျဈဘရှနျးက အိမျကှငျး တဈကွိမျ ၊ အဝေးကှငျး ၃ ကွိမျနိုငျထားဖူးပါတယျ။ နောကျဆုံး ယှဉျပွိုငျထားတဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇငျဘာ နဲ့ ၂၀၁၈ ဧပွီလ ရလဒျမြား အရတော့ ယူနိုကျတတျဟာ ၂ ကွိမျလုံး ရှုံးနိမ့ျထားပါတယျ။
နောကျဆုံး ၅ ပှဲ ရလဒျမြားကိုပွနျကွည့ျရငျတော့ ယူနိုကျတကျဘကျက ( W,L,D,W,L ) ရှိနပွေီး ဝကျဈဘရှနျးကတော့ ( L, L, D, D, L ) ဆိုတဲ့ ရလဒျမြားထှကျပေါျထားပါတယျ။
ဝကျဈဘရှနျး ရဲ့ အခုနှဈ ခွစှေမျးကတော့ လုံးဝ အကဘြကျမှာ ရှိနသေလို ယူနိုကျတတျ ရဲ့ အခုနှဈ ခွစှေမျးကလညျး သတေဈနေ့ မှေးတဈနေ့ ဖွဈနတောကိုတှေ့ရပါတယျ။ အခုနှဈ ဘောလုံးရာသီ စစခငြျးကနေ အခု ပှဲစဉျ ၉ အထိ ရမှတျမြား ရလဒျမြားကို တှကျခကြျကွည့ျပွီးနောကျမှာတော့ ယူနိုကျတကျ က ၃ ပှဲနိုငျ ၊ ၁ ပှဲသရေ ၊ ၃ ပှဲရှုံး ရလဒျဖွင့ျ အမှတျပေးဇယား အဆင့ျ ၁၄ နရောတှငျ လညျးကောငျး၊ ဝကျဈဘရှနျးက နိုငျပှဲ မရှိ ၊ သရေ ၃ ပှဲ ၊ ၅ ပှဲရှုံး ရလဒျဖွင့ျ အမှတျပေးဇယား အဆင့ျ ၁၈ နရောတှငျလညျးကောငျး အသီးသီး အပွိုငျအဆိုငျရပျတညျနကွေတာကိုတှေ့ရပါတယျ။
အဆိုပါ ၂ သငျး မှာ ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးထားတာကတော့ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈ က ၅ ဂိုး သှငျးယူပေးထားပွီး သူ့နောကျမှာတော့ မားကပျရကျဖိုဒ့ျ နှင့ျ ရောျဘငျဆငျ တို့က ၂ ဂိုးစီ သှငျးယူပေးထားကွပါတယျ။ ဂိုးဖနျတီးမှုမှာလညျး ဖာနနျဒကျဈ နှင့ျ ရကျဖို့ဒ့ျတို့က ၃ ကွိမျ ဖွင့ျ ဦးဆောငျနပွေီး သူတို့နောကျမှာတော့ တဈဖကျအသငျး ကစားသမား ပီရဲရား ရှိနပေါတယျ။
ကှငျးလယျဒိုငျလူကွီးအဖွဈ David Coote , Assistants: Lee Betts, Nick Hopton. Fourth official: Martin Atkinson. VAR: Peter Bankes. Assistant VAR: Andy Halliday တို့က အသီးသီးတာဝနျယူသှားကွမှာဖွဈပါတယျ။
Previous Article လူးဝစ်ဆွာရက်ဇ် Covid-19 တွေ့ရှိ
Next Article ယူနိုက်တက်နှင့်အတူနှုတ်ဆက်ချိန်တန်ပြီလား ဆက်ရှိမှာလား မေးခွန်းများစွာနဲ့ ကစားသမားများ